वृद्ध भत्ता र कर्मचारीकाे तलब बढ्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक कति पुग्यो ? - News 88 Post
वृद्ध भत्ता र कर्मचारीकाे तलब बढ्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक कति पुग्यो ?
May 29, 2021 May 29, 2021 N88LeaveaComment on वृद्ध भत्ता र कर्मचारीकाे तलब बढ्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक कति पुग्यो ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइनेछ । विशेषगरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ । यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार बजेटमा महत्वपूर्ण दर यथावत् राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर यथावत् छ । राजस्व सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । समितिले पनि यसपटक महत्वपूर्ण करको दर तलमाथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ ।
बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामै आधारित भएर निर्माण गरिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि बजेट तथा स्रोत अनुमान प्रक्षेपणसहित सरकारलाई करिब १७ खर्ब रुपैयाँ सिलिङ बजेट ल्याउन सुझाएको थियो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सोही सुझावकै वरिपरि रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
विपक्षी दलका नेता तथा विज्ञ सरकारले बजेट संसद्मा प्रस्तुत नगरेकाले नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन नगरे पनि वृद्धा भत्ता ५ हजार पुर्याउने र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषय पनि पचिल्ल्लो समय चर्चामा छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने सरकारको तयारी छ ।
भीम रावलकाे कविता भाइरल ‘राष्ट्रलाई नाश्ने गलेर नाश हुन्छ !’
‘उज्ज्वलका लागि दुर्गा प्रसाईंद्वारा घोषित सहयोग हामीलाई भविष्यमा पनि चाहिँदैन’
नेपालसँग सीमा जाेडिएकाे भारतकाे उत्तराखण्डका बच्चाहरूमा तीव्र रूपमा फैलियो कोरोना
२०७७ का चर्चित ११ राजनीतिक घटना, फर्केर हेर्दा
April 13, 2021 April 13, 2021 N88
प्रचण्ड र देउवालाई चक्मा दिँदै यसरी नजिकिए ओली–महन्थ